छक्का पञ्जा -३ को तीन दिनमा ३ करोड ३७ लाख व्यापार : आजको व्यापार अझ राम्रो हुने संकेत | News Filmy
यस पटक फिल्म क्रिटिक्सहरुबाट समेत राम्रो प्रसंसा बटुल्न सफल भएको फिल्म छक्का पञ्जाको तेश्रो सिक्वेलले तीन दिनमा ३ करोड ३७ लाख माथिको कारोबार गरेको छ ।
पहिलो दिन अल नेपाल १ करोड ३१ लाख ग्रस कारोबार गरेको फिल्मले बुधबार, बिहिबार र हिजो शुक्रबार गरेर अल नेपाल ३ करोड ३७ लाख ग्रस कारोबार गरेको हो । पहिलो दिन मोफसल तर्फ यो फिल्मले ५७ लाख र राजधानी टेरिटोरीबाट ७४ लाखको बम्पर कलेक्सन गरेको थियो ।
यो तीन दिनमा फिल्मले मोफसल तर्फ मात्रै १ करोड ५० लाख कारोबार गरेको छ भने राजधानी तर्फ १ करोड ८७ लाख कलेक्सन गरेको छ । तसर्थ यो तीन दिनको कूल कलेक्सन जोड्दा छक्का पञ्जा- ३ ले ३ करोड ८७ लाख कलेक्सन गरेर आफूलाई हिट फिल्मको रुपमा उभ्याउँन करिब सफल भएको छ भन्दा अब फरक नपर्ला ।
दीपक दीपाको यो पाँचौ प्रोजेक्ट उनीहरुको करिअरकै पाँचौ निरन्तर हिट श्रङखला भईदिनुका साथै पछिल्लो एक दशकमा लगालग पाँच वटा हिट फिल्म दिने मेकरका रुपमा पनि उनीहरुलाई चिनाएको छ ।
यसैगरी आज शनिबार परेकाले पनि बिहानै देखि हल हलमा दर्शकको बाक्लो उपस्थिती देखिएको छ । २ करोड लागतमा बनेको यो फिल्मले न्यू मिडिया राईटस् र ओभरसिज राईट्स बेचेर १ करोड उठाईसकेको छ भने आई.एमी लगायतका विभिन्न ब्रान्डसंग सहकार्य गरेर ८० लाख रुपैया उठाएको थियो ।
तसर्थ लगानी उठाउँन २० लाख मात्र बाँकी रहदा हलमा आएको यो फिल्मले रिलिजको पहिलो दिन बिहानीका शोहरुबाटै आफ्नो लगानी उठाएर नाफा तर्फ अगाडी बढिसकेको जानकारी हामी दिन चाहन्छौं ।
Box Office : छक्का पञ्जा- ३ को अदभूत कलेक्सन : आफ्ना सवै रेकर्ड तोड्यो
छक्का पञ्जा ३ को पोष्टर बन्यो यस्तो : तर विडम्बना देखियो है सस्तो
छक्का पञ्जा ३ को नयाँ गीतमा के राम्रो के नराम्रो ? लोकेशनमा हराए कलाकार
समीक्षा : छक्का पञ्जा – ३ : गीत राम्रो कि टिम ?
छक्का पञ्जा- ३ को सेटमा के-के भयो ? माग्ने, मुन्द्रे र दीपकराज गिरीसंगको रमाईलो
दीपाले सुनाईन छक्का पञ्जा-३ को गीत : विहेको कुरामा यस्तो तर्क (भिडियो)